- चीन शाङ्घाई Mutong चार भन्दा साधारण समस्याहरू: एक Inflatable जल स्लाइड कसरी समाधान गर्न
चार भन्दा साधारण समस्याहरू: एक Inflatable जल स्लाइड कसरी समाधान गर्न
संरचना चढाई बच्चाहरु
Inflatable पानी स्लाइडहरू अत्यन्तै लोकप्रिय बनेका छन् र पर्याप्त एक तिमी किन थाहा छ तिमी भाग्यशाली हो भने स्वामित्व। तपाईं एक inflatable पानी स्लाइड समाधान कसरी जानकारी खोजिरहेको यदि तपाईं सही ठाउँमा आएका छन्। Banzai फल्स सबैभन्दा पहिचान उपलब्ध ब्रान्डहरु को एक र सबै भन्दा राम्रो बिक्री हुन हुन्छ। दुर्भाग्यवश पनि धेरै भन्दा समस्याग्रस्त स्लाइडहरू एक हुन थाल्छ।
त्यहाँ समाधान गर्न सजिलो र सबै आशा गरेभन्दा छन् केही छन् कि केही मरम्मत छन्। म चार भन्दा साधारण समस्या ढाक्न जाँदैछु र तपाईं आफै तिनीहरूको हेरविचार र शायद आफ्नो बच्चाहरु मनपर्ने खेलौनाहरू मध्ये एक छ के बचत गर्न सक्नुहुन्छ कसरी।
1 मोल्ड: राम्रो गर्मी यहाँ फेरि छ र पहिलो तातो दिन आफ्नो बच्चाहरु पानी स्लाइड लागि भीख माँग गर्दै छन् र तपाईं भण्डारण देखि यो अनप्याक र खोजें सबै ढुसी लागेको छ। मोल्ड भद्दा छ र एक संभव स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्छ तर यो तपाईं यसलाई देखि छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन् पनि व्यापक छैन कहिलेकाहीं भने। पलिएस्टर क्यानभास म सिफारिस औरोरा नाउ स्वच्छ प्लस लागि सुरक्षित छ कि एक leaner प्राप्त गरेर सुरु गर्नुहोस्। राख्न सफा छ मद्दत गर्न एक वर्ष एक पटक आफ्नो inflatable धोइदिनुभएर विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
2. च्यातेर वा प्वाल पार्ने काम भएको कपडा मा: कुनै कुरा तपाईं आफ्नो हुनुहुन्छ कसरी होसियार inflatable पानी स्लाइडएक टियर वा प्वाल पार्ने काम हुन सक्छ। तपाईं देखावटी वा सबै फुलाउँदा अन्तर्गत छ कि स्लाइड र सूचना फुल्नु नगरेसम्म यो नोटिस सक्छ। यदि यो हुन्छ तपाईं कपडे टियर लागि शिकार सुरु गर्नुपर्छ।
तपाईंको स्लाइड सबै फुल्नु भने छैन क्षति व्यापक पर्याप्त तपाईंलाई सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ कि हुन सक्छ। तपाईंको स्लाइड अलिकति मात्र कम देखावटी छ भने यो शायद टियर सानो छ र पाउन गाह्रो हुन सक्छ भन्ने हो। सजिलो यो स्लाइड फुल्नु र पकवान साबुन र पानी को एक मिश्रण भरिएको स्प्रे बोतल संग धारा निकलना छ बनाउन एक चाल। तपाईं एक लिक छ यदि escaping हावा बबल गर्न मिश्रण कारण गर्नुपर्छ र तपाईंले आफ्नो समस्या को स्रोत पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं लिक पाउन एक पटक तपाईं त्यहाँ छैन एक भन्दा बढी निश्चित गर्न स्लाइड बाँकी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले बडा रही देखि रोक्न छ प्वाल अप सिलाई द्वारा सुरु भएको कपडा एक चीर वा टियर मर्मत गर्न। एक पटक तपाईं यसलाई सिलना तपाईँ केही टास्ने र प्याच लागि सामाग्री को एक टुक्रा आवश्यक हुनेछ। उनीहरूले लागि पाल मर्मत तिनीहरूलाई हुनुपर्छ लगभग शिविर उपकरण बेच्छ भनेर कहीं देखि एक क्यानभास मरम्मत किरा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
कि किरा साथ निर्देशन बस तपाईं सम्पूर्ण चीर ढाक्न पर्याप्त ठूलो एक प्याच प्रयोग निश्चित पालना गर्नुहोस्। को प्याच सामाग्री ठूलो होइन भने पर्याप्त तपाईं बस बनाउन तपाईंले लगभग 1 इन्च द्वारा seams ओभरल्याप निश्चित एक भन्दा बढी टुक्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
3. विभाजन Seams: दुर्भाग्यवश आफ्नो स्लाइड को seams मा अलग आउँदै छ भने तपाईं बनाउन मरम्मत को मुश्किल प्रकार छ। अधिकांश समय क्षति यस प्रकार समाधान गर्न पनि व्यापक हुन सक्छ तर यी स्लाइडहरू महंगा भएकोले तपाईं शायद यो एक शट दिन चाहन्छु। तपाईंले एक प्वाल मर्मत नै कदम पालना जाँदैछन्।
को सिउनी अप सिलाई द्वारा शुरू, जहाँ विभाजन रोक्छ परे एक सानो जाने निश्चित हुन। कि गरिन्छ पछि तपाईं प्याच सामाग्री संग कवर जाँदैछन्। त्यसपछि आफ्नो औंलाहरु पार र स्लाइड धारण यदि हावा त्यसपछि पछाडि एक पेट आफैलाई दिन मा ब्लोअर बारी।
4 एक दोषपूर्ण वा भाँचिएको ब्लोअर: तपाईं विद्युत मोटर मरम्मत संग अनुभव नगरेसम्म यो ब्लोअर एकाइ खराब छ भने तपाईं साँच्चै यो प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। $ 200 प्रकार र अवस्था आधारमा - तपाईं $ 50 देखि कहीं लागि eBay प्रतिस्थापन blowers खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई सही रूपमा काम गर्न को लागि तपाईं एक गर्न ब्लोअर आकार र बल मेल गर्न आवश्यक हुनेछ।
Banzai फल्स छैन त्यहाँ मेरो विचारमा एक उच्च गुणवत्ता उत्पादन प्रस्ताव जो ब्लास्ट क्षेत्र र Bounceland जस्तै अन्य ब्रान्ड inflatable पानी स्लाइड मात्र निर्माता छ। Banzai जान्छ जो धेरै मानिसहरू तिनीहरूलाई कसरी गर्ने निर्देशन खोज्दै स्थायित्व संग समस्या धेरै छ जस्तो देखिन्छ। मलाई आशा छ तपाईं आफ्नो स्लाइड मर्मत गर्न तर यदि अन्य ब्रान्डहरु केही बाहिर जाँच गर्न सक्षम छन्।
चार भन्दा साधारण समस्याहरू सम्बन्धित भिडियो: एक Inflatable जल स्लाइड कसरी समाधान गर्न: